Muxuu ka yiri Leroy Sané kaddib markii uu si rasmi ah ugu biiray Kooxda Bayern Munich?? – Gool FM
Liverpool, Man City, Real Madrid, Inter Milan, Bayern Munich, Atletico Madrid & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono tartanka Champions League
Dajiye July 3, 2020
(Munich) 03 Luuliyo 2020. Kooxda Bayern Munich ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday maanta oo Jimco ah, inay ka saxiixatay xiddiga reer Germany iyo naadiga Manchester City ee Leroy Sané, heshiis 5 sano ah ee gaaraya ilaa iyo 30-ka June 2025.
Leroy Sané ayaa ahaa bar-tilmaameedka koowaad ee kooxda Bayern Munich suuqa xagaaga, kaddib markii ay ku guuldarreysatay inay la saxiixato xagaagii lasoo dhaafay.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Bayern ayaa xagaagan ku soo laabatay raacdada ay ugu jirtay saxiixa Leroy Sané, waxayna ugu dambeyntii ka saxiixatay heshiis 5 sano ah ee gaaraya ilaa iyo 30-ka June 2025.
Haddaba Leroy Sané ayaa la hadlay website-ka rasmiga ah ee kooxda Bayern Munich, kaddib markii uu heshiis cusub u saxiixay naadiga reer Germany, wuxuuna yiri:
“Bayern Munich waa koox weyn, waxeyna leedahay ujeedooyin waa weyn, ujeedooyinkaasna waa kuwa ila haboon aniga ahaan”.
“Waxaan sugayaa tartan cusub oo aan la galo Bayern Munich, mana sugi karo inaan kooxda tababar la sameeyo”.
“Si fiican ayaan u aqaanaa Hans-Dieter Flick, kaddib markii aan kala soo shaqeeyay xulka U-21 ee Jarmalka, xiriir fiican ayaan la leeyahay isaga”.
“Waxaan doonayaa inaan kula guuleysto koobab badan inta suurtagal ah Bayern Munich, Champions League-na runtii waa kan ugu sareeya”.
RASMI: Bayern Munich oo ku dhawaaqday inay la saxiixatay Leroy Sané